Gudoomiye Muungaab oo weerar ku qaaday hey’addaha Dowlada & kuwa ajaaniibta |
Gudoomiye Muungaab oo weerar ku qaaday hey’addaha Dowlada & kuwa ajaaniibta
Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Gen Xasan Xuseen Muungaab ayaa weerar afka ah ku qaaday hey’addaha dowladda iyo kuwa ajaaniibta kaddib markii uu arkay xalay waddooyin lagu xiray dhagxaan.
Isagoo ka hadlaayay Xaflad ka dhacday degmada Wadajir oo xilka ay ku kala wareegayn guddoomiyii horre iyo kan cusub ayuu sheegay in aan marnaba la aqbali doonin in waddooyinka waaweyn ee caasimada Muqdisho ay dad gaar ah dhagxaan ku xirtaan.
Muungaab ayaa ugu yeeray hey’addaha iyo shaqsiyaadka saas sameeya Burcadda waddooyinka mana u dul qaadan doono ayuu yiri.
“Waddooyinka dhagxaanta lagu xirtay waa xaaran, waa naf la caari, hey’addaha siddaas sameeya waxaan u sheegeynaa ma u dul qaadan doono, cidda rabta in ay ammaankeeda sugto dhagxaan ha ku xirato albaabkeeda laakin waddo la xiraayo ma jirto arrintaas tallaabo cad ayaan ka qaadi doonaa haddii aan nahay maamulka gobalka Banaadir” ayuu yiri Muungaab.
Inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa dhagxaan lagu gooyay, iyadoo ay siddaas sameeyeen hey’addaha dowladda iyo kuwa ajaaniibta taasoo sabab u ah markii ay soo bateen qaraxyada ay geesanayaan maleeshiyada Shabaab.